အားပါးပါး !!! အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ ေမာင္ေလးေတြ ေႂကြခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ ကိတ္လြန္းေနတဲ့ ေမပန္းခ်ီ – Shwe Yoe
အားပါးပါး !!! အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ ေမာင္ေလးေတြ ေႂကြခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ ကိတ္လြန္းေနတဲ့ ေမပန္းခ်ီ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မေပန်းချီကတော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေထဲကတစ်လက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေခေတ်စားခဲ့တဲ့ ကာလမှာလည်း ပရိတ်သတ်တွေတစ်ခဲနက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှုတွေကိုရရှိခဲ့တာပါ။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက်ကျရာအရုပ်ထင်အောင် အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှတွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဖက်ရှင်မျိုးလေးတွေကို များသောအားဖြင့် ဝတ်တတ်တာကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ အာရုံစိုက်အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားခဲ့ပါတယ်နော်။
ဒီနေ့မှာလည်း အမိုက်စားခန္တာကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှတွေပေါ်လွင်နေတဲ့ ဖက်ရှင်အမိအမိုက်တွေနဲ့အတူ ” Good Night ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ပုံတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခွေးလေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
အူဝဲနဲ႔ေတြ႕ဖို႔သြားတဲ့ ေျပတီဦးရဲ႕ေထာင္ထဲကရယ္ရခက္ ငိုရခက္ အျဖစ္အပ် က္ေလးကို ေျပာျပလာတဲ့ ျပည္သူတစ္ဦး